Australia's Lockdowns Inobata Blow kune Yekunze Yekufamba Kudzoserwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Australia Kuputsa Nhau » Australia's Lockdowns Inobata Blow kune Yekunze Yekufamba Kudzoserwa
Airlines • nhandare yendege • Australia Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kumhanyisa Mota • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Kukurumidza kudzora kudzimba muAustralia kunogona kunge kuri munjodzi nenyaya dzekukwirana, uye kuvharwa kwemuganhu kuwedzerwa, kunyangwe ichisimbisa kudiwa kwemumba muH1 2021.
Lockdowns uye mamiriro emuganhu akavharwa kuitira kushomeka uye kudzora kudzoka kwekufamba kudzoka.
Qantas nendege yakamira pasi nevashandi vayo inoratidza tarisiro yemugwagwa murefu wekudzoka.
Kukwira kwezvirwere kunotungamira mukurova kumabhizinesi ekushanya.
ne Ositireriya ichirwira kukwira kwezviitiko zveCOVID-19, kufamba mudzimba kwakadzikira zvakanyanya. Ipo kuAustralia kupora mudzimba kwaive kwakasimba muH1 2021, kudzoreredzwa kwekuvharirwa uye kuvharwa kwemuganhu wenyika kuchashanda sekurova, uye kumisikidza kunetesa nekudzora kudzoka kwekufamba mudzimba. Uyezve, Qantas yendege yakamira pasi pevashandi vayo inoratidza tarisiro yemugwagwa murefu wekudzoka.
Kukurumidza kudzoka mudzimba muAustralia kunogona kunge kuri munjodzi nenyaya dzekukwirana, uye kuvharwa kwemuganho kuri kuwedzerwa, kunyangwe kusimbisa kudiwa kwemumba muH1 2021. Yekupedzisira indasitiri yekufungidzira inotarisira kuti kufamba kwemudzimba kudzokere kune 93.8 mamirioni nzendo muna 2021, ichidzokera ku80.4% of pre-COVID nzendo (2019), asi iyo delta musiyano inogona kutadzisa izvi zvinotarisirwa kupora kwakasimba. Australia yanga iri mutungamiri mukuchengeta COVID-19 iri pasi pehutongi nehutachiwana hwakanyanya hwehutachiona uye zvakatemerwa zvinorambidzwa zvekufamba kwenyika, zvakachengetwa makesi.
Kuwedzera kwehutachiona kunotungamira mukurova kumabhizinesi ekushanya, parizvino achivimba nevafambi vekumba kudzamara panenge pakati pa2022, apo miganho yenyika ingavhurwazve. Kana kukiyiwa kukaramba kuripo uye mufambi kuvimba kuchidonha, kudiwa kunogona kudzikira, uye kupora kwemukati meAustralia kunogona kuwedzerwa.
Mitemo ichangoburwa yakashaisa nzara indasitiri yekutengeserana yeAustralia, uye ndege huru kwazvo munyika - Qantas - iri kutanga kunzwa kurumwa nekumisa pasi vashandi mazana maviri nemazana mashanu.
Kudzorerwa kweQantas kwakanangana nemigwagwa yepamba nemiganhu yenyika dzakawanda yakavharwa. Mutakuri anga achitanga kupora zvine mutsindo, kunyangwe kusimuka kwezviitiko kwave kunetsa. Kuderera kwakamwe kamwe kwekufamba mudzimba uye kutarisirwa kuwedzerwa kwekuvhara kwakadzikisira tarisiro yetariro. Qantas 'zviito nekukurumidza zvinodzora mutoro wezvemari kubva pakurasika kwetraffic uye zvinofanirwa kubatsira kuchengetedza ramangwana kugona kwendege. Nekudaro, kupora kwaigona ikozvino kuderedzwa kana zvirambidzo zvasimudzwa sezvo zvinotora nguva kudzosa vashandi uye zvinogona kudzora kuwedzera kwekuedza.
Australia yanga ichinonoka kubaya nhomba vagari vayo nekuda kwenzvimbo dzakaderera. Nekudaro, izvi zvinounza dambudziko uye zvinogona kunonoka kudzokorodza kune vanoda kutora kana mufambi chivimbo chikatanga kutora rova.
Mushonga uyu wakapa chivimbo kune mamwe marudzi uye uri kutanga kutsigira kufamba kwekudzoka. Nekushomeka kwekudzivirira kwekudzivirira, Australia iri kumashure kweimwe nyika. Nechiremba chekudzivirira chakaderera, vafambi vanogona kusazeza kufamba vasina mushonga sezvo njodzi yave kuwedzera. Naizvozvo, kupora kunogona kunonoka kudzamara chirongwa chekudzivirira chikaungana uye vafambi veAustralia vozozvishingisa zvakare.